Mas'uuliyiintii ku dhaawantay Kismaayo oo Itoobiya loo qaaday, qaar ka tirsan ganacsatada beelaha aan hubeysneyn ee magaalada Kismaayo oo xabsiga loo dhigay qarixii ay dad badan ku dhinteen iyo weerarro isdaba joog ah oo xalay lagu qaaday goobo ka tirsan magaalada Muqdisho. Ruunkinet 13/02/07 (Click)
Mas'uuliyiintii isugu jirtay saraakiisha ciidamada iyo maamulka gobolka Kismaayo ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku dhaawantay qarixii dhawaan ka dhacay Kismaayo ayaa la sheegay in maanta loo qaaday magaalada Addis Abbaba ee dalka Itoobiya.
Warkan oo aan ka helnay magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qaar ka tirsan mas'uuliyiintaasi uu dhaawacoodu halis yahay.
Sidoo kale, qaar ka tirsan ganacsata ka soo jeeda beelaha aan hubeysneyn oo ee loo yaqaan reer Guriga (Giir Giir) ee deggan magaalada Kismaayo ayaa xabsiga loo taxaabay dhawaan.
Ganacsatadan oo ka soo jeedda beelaha Gaaljecel iyo Cowrmale ayaa la sheegay in lagu eedeynayo qarixii ka dhacay Kismaayo ee ay ku dhinteen dad badan kuna dhaawacmeen qaar kale.
Ganacsatada la xiray ayaa qaar ka mid ah magacyadooda lagu sheegay in ay ka mid yihiin Xasan Cabdulle Maxamed (Bannad) iyo Xuseen Madoobe oo caan ka ah magaalada Kismaayo iyo gobolka Jubbada Hoose.
Arrintan ayay dad badan oo aan ka wereysannay magaalada Kismaayo u arkeen in ay taageerayaasha madaxweyne Yuusuf oo uu ka mid yahay Col. Cabdirisaaq Afguduud doonayaan in ay ka weeciyaan aragtiga ay dad badan qabaan oo ah in uu Afguduud ka dambeeyay qaraxaasi.
Dhanka kale, weerarro isdaba joog ah ayaa xalay lagu qaaday dekedda weyn ee magaalada Muqdisho, guriga wasiirka ganacsiga iyo saldhigga ciidamada Booliiska ee degmada Madiina.
Weerarada joogtada ah ee lagu hayo goobo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in lagu diidan yahay joogitaanka ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyada taageerayaasha Col. Cabdallahi Yuusuf ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya.